အကြင်နာနန်းတော်: အကူအညီတောင်းရန်မှ မေးဖြေများ
2 Jul 11, 05:52 PM
Paing Paing: ကျတော့ gmail ဟက်ခံလိုက်ရလို့ တစ်ချက်လောက်ကူညီပေးပါလား ကျေးဇူးပါ၊
Paing Paing ရေ..Gmail ဟက်ခံရပြီဆိုတော့ အောက်က ဧကရီပေးထားတဲ့ လင့်ခ်လေးမှာ မေးထားတာတွေ အနီးစပ်ဆုံး ဖြည့်လိုက်ပြီး Gmail password ပြန်ယူကြည့်လိုက်နော်..
အရင် Account ကလည်း Password၀င်လို့မရတော့ရင်..Word Verify လုပ်လိုက်မှပြန်ရတာပါ။ Mail ကို Backup လုပ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။..
တကယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ပြန်ယူလို့ မရတော့ဘူး ..အရေးကြီးတဲ့ Mail တွေကို ကိုယ့်အကောင့်သစ်ထဲ ပြန်ဝင်လာအောင် လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
5. Gmail အဟောင်း ရဲ့ Address ကို ဖြည့်ပါ။
7. Gmail အဟောင်းက Password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Label incoming messages box ရှေ့တွင် အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Dropdown တွင် မိမိနှစ်သက်သလို lable အသစ်တစ်ခု ပေးပါ။
11. Send Verification button ကို click ပါ။
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Email အားလုံး ရောက်ရှိလာပါ လိမ့်မယ်။
27 Jun 11, 09:32 PM
aungmyomin: ခင်မင်သူများထံသို့ Email ပို့ရန်ခတ်ခဲနေပါသဖြင့် email အကောင့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်မလားလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ
ကျွန်တော် gmail အကောင့် မရှိတဲ့ အတွက် မေးပို့ရန်ခတ်နေတဲံ့ အတွက် Gmail အကောင့် ကို တောင်းဆိုချင်းဖြစ်ပါတယ်။ခတ်ခဲလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်းလည်းအတင်းမတောင်းဆိုချင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
Gmail username.. aungmyaomin1500@gmail.com
Gmail password.. aung123456aung
နောက်တစ်ခု အရေးကြီး Mail ပို့စရာရှိရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်Email မရှိသည်ဖြစ်စေ ကွန်နရှင်ကြောင့်ဖွင့်မရသည့်အခါတွေမှာ မိမိရဲ့ အကောင့်ကို အသုံးပြုစရာမလိုပဲ ဖရီးပို့လို့ရတဲ့ ဆိုက်ဒ်တစ်ခု ဧကရီ ပေးလိုက်ပါ့မယ်။
1.http://www.note2email.com/write ဒီဆိုဒ်ကို အရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
2.Gmail Address နေရာမှာ မိမိပို့ချင်တဲ့ Gmail အကောင့်ကို ရိုက်လိုက်ပါ။
3.Title မှာကတော့ မိမိ ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာ ရေးလိုက်ပါ။
4.Note နေရာမှာ မိမိ ရေးချင်တဲ့ ပို့ချင်တဲ့စာတွေကိုရေလိုက်ပေါ့။
5.Encryption Key နေရာမှာ ဘာမှ မရေးလဲရပါတယ်။
6.ပြီးရင် ပုံကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာထပ်ရွေးလိုက်ပါ။
7.ပြီရင် Send It ကိုနိုပ်လိုက်ပါ။
ပို့စ်ရေးသားသူ ဧကရီ ရက်စွဲ Monday, July 04, 2011